Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Danish Jannik Vestergaard Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Jannik Vestergaard na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, mbido ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị tụgharịrị nwunye, ndụ na ndụ onwe onye.
Na nkenke, anyị na-ewetara gị Bio nke Vestergaard dị nkenke site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke Memoir ya, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na-aga n'ihu.
Akụkọ ndụ Jannik Vestergaard.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu n'ime CBs tolitere na England. Dika ozo, achoputala ya Ndị na-agụ BBC dịka otu n'ime ndị egwuregwu iri kacha elu n'afọ 10/2020 Premier League. N'agbanyeghị nkwanye ugwu ahụ, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ ya. Iji jeere gị ozi nke ọma, anyị akwadebela Memoir ya ma n’enweghi nchekwube, ka anyị bido.
Jannik Vestergaard Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, aha ya bụ "Veserguard". Jannik Vestergaard A mụrụ na ụbọchị 3 nke August 1992 nne ya, Wiebke na nna, John na obodo Hvidovre, nke dị na mpụga Copenhagen, Denmark.
Big Dane bụ naanị nwa nwoke atọ mụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya hụrụ n'anya. Lee, Jannik dị ka papa na mama mara mma. O yiri ka hà nọ n’afọ ndị nke 50 ya.
Jannik Vestergaard Uto:
Onye na-egwu egwu Danish nwere ụmụnne nwanyị abụọ (Anna na Marie) ndị ya na ha nọrọ kemgbe ọ bụ nwata. Dịka nwatakịrị, ọ hụrụ football n'anya (ọ nweghịkwa ihe ọ bụla). N’ezie, onye ọ bụla n’ezinụlọ ya hụrụ na ọ pụrụ iche malite n’oge a mụrụ ya. Lee obere Jannik na nne ya na ụmụnne ya ndị nwanyị.
Ya na ụmụnne nwanyị abụọ Anna na Marie tolitere.
… …Hụnanya Jannik nwere maka bọọlụ mere ka o tolite ajụjụ karịa mmasi n'ihi ihe abụọ. Nke mbu, nne na nna ya (Wiebke na John) na umu nne nwanyi abuo (Anna na Marie) ha nile guru egwu. Nke abuo, ogo ya masịrị egwuregwu Danish ndị ama ama - bọọlụ basketball na bọọlụ aka.
Jannik Vestergaard Ezigbo Ezinụlọ:
N'ihi ezi mmasị ezinụlọ ya nwere n'egwú, ezinụlọ ahụ biri ma nwee nkasi obi dị ka ụmụ amaala nọ n'etiti. Anyị nwere foto nke nwatakịrị ahụ na-ekpori ndụ na ogige ntụrụndụ n'etiti oge ndị ọzọ echefu echefu. N'ihi ya, ọ bụghị nwa dara ogbenye.
Foto nwata bụ Vestergaard ya na nwanne ya nwanyị Anna n’ogige ntụrụndụ.
Ọzọkwa, enweghị nrụgide na Vestergaard ịwụli elu na egwu ahụ ka ndị mụrụ ya lere ya anya ka ọ bụrụ onye nwere mmasị na football. Ka anyị wee ghara ichefu, nna nna ya na nwanne nna ya na nwanne nwanne ya bụ ndị ịgba ọsọ ụkwụ n'ihu ya.
Ezigbo ezinụlọ Jannik Vestergaard:
Obi abụọ adịghị ya, aha onye ọkpụkpọ Danish nwere ike ọ gaghị enye gị German vibes mgbe ị na-akpọ ya. Agbanyeghị, ụfọdụ n'ime ndị nna nna ya sitere na West Germany - kpomkwem Krefeld.
You maara?… Otu n'ime nne na nna Jannik Vestergaard (mama ya Wiebke) bụ German mgbe papa ya (John) dị ọcha Danish. Nsonaazụ sitere na nyocha anyị gosiri na o nwere mgbọrọgwụ German site na usoro ndị nna ochie.
Jannik Vestergaard Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ:
You maara na kpakpando Denmark dị naanị afọ anọ mgbe ọ malitere nzọụkwụ mbụ ya na asọmpi asọmpi na ụlọ ọrụ Vestia BK dị na mpaghara? Mgbe oge ruru, Jannik kwagara n'akụkụ ama ama - Bk Frem.
N'ezie, inweta ọzụzụ kacha mma nwere ike ịbịa naanị ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Denmark. N'ihi ya, iji nweta nnukwu nsogbu, ndị nne na nna Jannik Vestergaard gbara mbọ ka nwa ha nwee ule na FC Copenhagen. Obi dị m ụtọ na ọ nabatara ebe ahụ.
Afọ Mbụ na football:
Ọ dị mma ịmara ebe a na ndị ịgba bọọlụ na-abụbu onye na-eme egwuregwu na onye na-awakpo ya n'oge ọ bụ bọọlụ. Ka Vestergaard toro ogologo, toro ya, ha mere ka ọ laghachite n'ihu na ọrụ dị n'etiti ruo mgbe ọ mechara bụrụ onye na-agbachitere ya. Nke a bụ obere Jannik (n'oge ahụ) ka ọ na-amụmụ ọnụ ọchị.
Ọganihu ya mere ka ọ gbanwee ọrụ n'oge ọ bụ nwata na football football.
N'elu ọrụ ya na Copenhagen, ihe ngosi nke football mere ka ọ nwee uto nke na ahụ ya enweghị ike imeghari egwuregwu ahụ. N'ihi ya, 15 afọ malitere ịkwụsị inwe mmasị na football - enweghị ekele na a manyere ya ịnọdụ n'oche.
Jannik Vestergaard Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ụzọ dị mma, nwa ahụ akwụsịghị ịgba bọl kama ọ sonyeere ụlọ ọrụ Brondy nke aka ya n'uche nke aka ya. N'oge a, nne na nna Jannik Vestergaard ekwenyela maka nwa ha ịhapụ ụlọ akwụkwọ ka o wee lekwasị anya na egwuregwu ahụ. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọ bụ mgbe ọ na-egwuri egwu na derby obodo megidebubu klọb FC Copenhagen na onye scout si 1899 Hoffenheim hụrụ ya.
Mgbe ndị scout hụrụ Jannik ka izu ole na ole gachara n'oge egwuregwu ime ụlọ na Linkenheim, ọ kwadoro okwukwe ya na ike ya wee mee ka ọ banye na klọb ahụ. Na nke mbụ ya, o juru ndị ezinụlọ Jannik Vestergaard anya mgbe ha hụrụ ka ndị ha hụrụ n'anya hapụrụ ha gaa mba ọzọ. It bụcha ya maka ịdị mma.
Ọzọkwa, oge ikpeazụ nke onye na-agbachitere ya na Hoffenheim abụghị Rosy. Na 22, Vestergaard nwere obi abụọ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ ga-emezu nrọ ya. Naanị mgbe olile anya niile furu efu, Werder Bremen bịara ịchọ ọrụ ya na 2015.
Ihe niile yiri ka ọ wụrụ ya akpata oyi n'ahụ na Hoffenheim tinyere obere egwuregwu.
Jannik Vestergaard Storyga nke Ọma Akụkọ:
Ọ bụ na Bremen na Great Dane nwere ihe kachasị mma ọ rịgoro na bọlbụ nke na ọ kwetara mgbe e mesịrị na nkwado Werder Bremen zọpụtara ya.
“Aga m enwe ekele n’ebe Werder nọ. Ha nwere okwukwe n'ebe m nọ mgbe klọb nwere mmasị na-achọ ịkwado m. ”
Ọzọkwa, mgbe ọ sonyeere Borussia Mönchengladbach si Werder, ọ malitere ịkụ elu ụdị. N'oge na-adịghị anya, Big Veserguard na-achọ ịlụ ọgụ site na klọb ndị isi nke Bekee. Dị ka akwụkwọ tinye ya, Jannik Vestergaard kwadoro onwe ya dị ka onye na-eche nche nchekwa Mönchengladbach.
Banye maka Southampton bụ nrọ maka nnukwu Veserguard.
Mgbe o mechara sonyere Southampton na 2018, ọ dịghị anya tupu ọ malite ịkọwa ihe atụ na Liverpool Virgil van Dijk n'ihi ihe ndị na-adịghị anya ịnọ iwu ya n'ikuku. Iji gwa eziokwu, ogo Jannik Vestergaard (1.99 m ma ọ bụ 6.6 feet) gbasiri mbọ ike emeela ka ọ ghara dị nso-efu na dike a na-enweghị mgbagha.
Ọganihu ngwa ngwa mgbe LifeBogger mepụtara akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, o guzobere onwe ya na ndị Saints dị ka talent Danish ọzọ na - aga nke ọma - dịka onye agbata obi ya Pierre-Emile Hojbjerg. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Jannik Vestergaard Wife?
Enwere blondie nke dị na ndụ Veserguard tupu 2009. Ya na onye na-agbachitere ya kemgbe ọ bụ nwata - ọbụlagodi tupu ọ nọ na Brondy. N'ihi ya, ọ ga-abụrịrị na ya keere òkè na nnwale nke Big Dane na obere mmeri ruo mgbe ọ ga - enweta Southampton.
Edere foto a nke di na nwunye na 2009.
Aha ya bụ Pernille Vennike, ọ bụkwa nwunye Vestergaard. Dị ka Martin Braithwaite, Jannik kpebiri na ya ga-alụ di ma ọ bụ nwunye mgbe ọ zuru oke - ọkachamara.
Onye hụrụ ya n'anya na enyi ya nwanyị gara ije n'okporo ụzọ na 2018 wee nọrọ ọnụ, na-ebi ndụ oge ọ bụla nke obi ụtọ ha mechara nwa nwoke (amụrụ 2019) iji kere òkè n'ọ shareụ ha. Lee foto nwunye Vestergaard ka ya na di ya ji ọilingụ na-amụmụ ọnụ n'oge agbamakwụkwọ ha.
Jannik Vestergaard na nwunye ya Pernille Vennike lụrụ na 2018.
Jannik Vestergaard Ndụ Ezinụlọ:
Onwere ndi mmadu anaghi akoputa mmekorita ya na ya site n’ihe o na-eme na boolu boolu. Naanị ha chọrọ ya ka ọ bụrụ nwoke ọ bụ ọ bụghị onye na-agba bọl na ụwa na-ahụ ya. Ha bụ ezinụlọ Vestergaard!
Lee ezinụlọ Vestergaards.
N'ebe a, anyị na-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ gbasara nne na nna nwanne Jannik Vestergaard. Na mgbakwunye, anyị ga-akọwapụta eziokwu gbasara ndị ikwu ya.
Eziokwu banyere Nna Jannik Vestergaard:
John bụ aha nna nna Nnukwu nwoke. Ọ bụbu onye ọkaibe na-akụ egwu, ọkachasị onye pianist gụrụ akwụkwọ na akụnụba na Mahadum. Nna na-akwado ya sitere na ezinụlọ Danish ma kọọrọ ya na nwunye ya (mama Vestergaard - Wiebke) na Copenhagen na Royal Danish Academy of Music. N'ebe ahụ, ha abụọ hụrụ n'anya mgbe ha na-agụ akwụkwọ ka ha bụrụ ndị ọkachamara n'ịgba egwu.
Eziokwu gbasara nne Jannik Vestergaard:
Wiebke bụ aha nke Veserguards mama. Amuru ya na 1967 na Krefeld, West Germany. Wiebke nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ German ma nwee ọrụ buru ibu na ụlọ ọrụ egwu dị ka cellist. N'ezie, dị ka ọ dị afọ isii, mama Jannik malitere ịkpọ cello n'ụlọ akwụkwọ egwu dị na German.
Super mum, Wiebke bụ onye otu European Union Youth Orchestra site na 1986-1989. Copenhagen Phil na-arụ ọrụ egwu egwu a kemgbe 1991.
Ekele ya, Vestergaard nwere nhọrọ nke ịgbago maka otu ndị otu mba German. Kama, o kpebiri ịbanye Denmark n'ihi na nne ya kwetara na ọ bụ maka ọdịmma ọrụ ya.
Eziokwu banyere ụmụnne nwanne Jannik Vestergaard:
Sistersmụnne nwanyị abụọ nke Great Dane Anna na Marie bụ ndị kachasị akwado ya na naanị ụmụnne. Ọ bụ ezie na duo ahụ yiri nke ahụ, a mụrụ ha afọ ole na ole mana ha nwere ezigbo mmekọrịta. Lelee ọdịiche dị n'etiti Jannik na ụmụnne ya ndị nwanyị.
Zute ụmụnne nwanyị Jannik Vestergaard.
Banyere ndị Jannik Vestergaard:
Ikwu banyere nna ochie nke onye agbachitere ahụ nne na nna ochie ya bụ maka ịkwọ ụgbọ mmiri na-enweghị mmiri. Otú ọ dị, anyị nwere ike iji obi ike kọọrọ na nne nne ya bụ Hannes Schröers bụ onye bụbu ọkachamara na ndị ọkachamara na German nke nwere akụkọ ihe mere eme na West Ham United.
Nke a bụ Vestergaard nna nna dị ka onye ọkpụkpọ West Ham?
N'otu aka ahụ, nwanne nna Vestergaard Jan Schröers na nwa nwanne nna Mika Schröers bụkwa ndị na-agba bọọlụ maka Bayer 05 Uerdingen na Borussia Mönchengladbach n'otu n'otu. Ka ọ dị ugbu a, enweghị ndekọ banyere nne nne nne agbachitere ya ebe amabeghị nwanne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya, na ụmụ nwanne ya.
Jannik Vestergaard Ndụ Nke Onwe:
N'okwu Southampton Legend:
"Enwere m mmasị na football na ihe niile gbasara ya, mana ọ bụghị ihe No1 na ndụ m."
N'ịbụ onye a maara dị ka nnukwu enyi enyi, Vestergaard bụ onye dị nro. Ọ bụ otu n'ime ndị kachasị mma ị ga-ahụ ma na-ewere ya dị ka onye dị umeala n'obi site na ndị mmadụ ọbụnadị na klas ya.
You buru ibu na Instagram? You gaghị enwe nchegbu na ịnweta mmasị na nkọwa na post gị ma ọ bụrụ na ịnwere Vestergaard na-eso gị. Ọzọkwa, Google Translate enweghị ihe ọ bụla na onye agbachitere ahụ nwere ezigbo iwu nke Bekee, asụsụ obodo ya na German.
Ọ bụghị nwoke ahụ zuru oke?
Ha na-ekwu na oge na-agbanwe ndị mmadụ mana onye ọkpụkpọ isii toro ogologo agbanwebeghị ụdị ọmarịcha agwa ya. Ọ ka nwere ezigbo obi ụtọ na ndị otu egwuregwu agaghị eme ihere ịkọwa dịka enyi.
Ihe omume nke mejupụtara ndepụta nke ihe omume ntụrụndụ na mmasi ya gụnyere ịgụ ihe, bọọlụ America, ezumike, ikiri ihe nkiri na iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Ebe ị gụchara ọtụtụ ọdịnaya anyị na ndụ na ịrị elu nke Veserguard, ọ ga-adị mfe ikwere na ụzọ kachasị mma iji nweta ụgbụ ruru nde Euro 15.8 tupu afọ 30 bụ ịzọ ụzọ ya ee?
Can nwere ike nweta otu ọganihu ego dị ka onye na-agbachitere ọ bụrụgodị na football abụghị usoro ahia gị. Mana ị ga-enwerịrị ike ị nweta ụgwọ ọnwa kwa afọ nke £ 3,120,000 na ụgwọ kwa izu nke £ 60,000 dị ka ọ na-eme ugbu a.
Enwere ọtụtụ mkpa ị nwere ike igboju nnukwu ego a, gụnyere inweta onwe gị ọmarịcha ụlọ na Winchester, England. Ọzọkwa, ị gaghị eche maka ị nweta onwe gị ụgbọ ala ihu igwe ọ bụla dịka Vestergaard mere n'ụgbọala dị n'okpuru.
Lee ụgbọ ala ọgụgụ isi nke snow kpuchiri.
Eziokwu Banyere Jannik Vestergaard:
Iji mechie akwụkwọ anyị na-adọrọ mmasị gbasara akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ eziokwu amachaghị ma ọ bụ Eziokwu banyere ya.
Eziokwu # 1 - Ndakpọ ụgwọ ụgwọ Southampton na ịkpata elekere abụọ:
Kwa Afọ £ 3,120,000
kwa ọnwa £ 260,000
Kwa Izu £ 59,908
Kwa .bọchị £ 8,558
Kwa elekere £ 357
Kwa Nkeji £ 5.95
Kwa nke abụọ £ 0.09
Anyị etinyela nyocha nke ọma na ego Jannik Vestergaard na-erite ka elekere na-akụ. Lelee n’onwe gị ego ole o megoro kemgbe ị bịara ebe a.
Kemgbe ị malitere ilele nke Jannik Vestergaard Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
N'eziokwu, Big Veserguard dị n'etiti ndị kachasị elu Ndị egwuregwu bọọlụ Danish ndị na-enweta ọtụtụ ego na mba ọzọ. You maara? Average nkezi Dane na-akpata 750 euro kwa izu kwesịrị ịrụ ọrụ maka izu 80 (afọ 1.5) iji nweta ụgwọ ọrụ kwa izu nke Jannik na Southampton.
Aha papa Vestergaard bụ John ebe ụmụnne ya nwanyị na-akpọ Anna na Marie. Na mgbakwunye, zutere otu Bishop Rome na Pope Francis. Kedu ihe ọzọ anyị kwesịrị iji nye ya mkpado Ndị Kraịst?
Nchịkọta zuru ezu nke isi 77 na ikike nke 78 adịghị mma na Vestergaard. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọtụtụ Fans nwere ike ịchọ ikwenye na akara ahụ ziri ezi, anyị maara na otu akụkụ nke ha na-eti mkpu karịa 83. Nke bụ eziokwu bụ, egwuregwu Jannik na-etinye ya n'otu ọkwa dịka Kasper Schmeichel (84).
Eziokwu # 4 - Pita:
Ndị na-egwu egwu dị ka Vestergaard na-eme anụ ụlọ mara mma karịsịa nkịta. O siri ike ịghara ịchọpụta na o nwere ezigbo doggie aha ya bụ Brady. Anyị na-atụ aro ka ọ kpọọ ya Buddy, nyere ha na ọ fọrọ nke nta ka ha ghara ikewa.
Foto dị obere nke Vestergaard na-efe efe na nkịta ya Brady.
Eziokwu nke 5: Oge kacha mwute nke ụbọchị Southampton ya:
Cheta Southampton (0) - (9) Leceister egwuregwu nke 25th nke October 2019? Ọ bụrụ na ịmee, mgbe ahụ ị ga-ama ụbọchị kachasị njọ na nnukwu nhụjuanya nke ọrụ ọkachamara niile.
Eziokwu nke 6: Mbido Southampton ya na Ọbara:
O doro anya na ndị mmadụ na-ekwu Nabata na Premier League! - maka ihe kpatara ya. Jannik's EPL izizi hụrụ ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya ka ha na-eku ume. Ọ bụrụ na i chefuola, nwa nwoke ohuru nke Southampton jidere ya ma mebie imi ọbara n'ụbọchị mbụ ya na-arụ ọrụ na England.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a banyere Giant Dane. Ihe ndekọ akụkọ ndụ Jannik Vestergaard na-akpali anyị ikwenye na ụzọ na-aga nke ọma anaghị adị mma mgbe niile, mana n'ikpeazụ, ọ na-emesi anyị obi ike na ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na naanị ọrụ siri ike. Obi abụọ adịghị, Jannik Vestergaard na-eguzosi ike n'ihe nye Southampton FC na ọ na-ama-atụle a Saints akụkọ mgbe ochie.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị nne na nna Jannik Vestergaard mma maka nkwado ha na ọrụ ya n'okwu na n'omume. Ọbụna mgbe ọ gwara ezinụlọ ya ebumnuche ya ịhapụ ụlọ akwụkwọ, ha kwụ ya n’akụkụ, na-eku ume:
“Chụwa nrọ gị, soro agụụ gị ma ị nwere ike ịlaghachi mgbe niile ma ọ bụrụ na ọ gaghị agbanwe otu ị si chọọ. I nwere ike ịlaghachi ụlọ akwụkwọ. ”
Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ n ’ịhụ ihe ọ bụla na - adịghị mma, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n’okpuru. Iji nweta ngwa ngwa nke Jannik Vestergaard's Bio, nke a bụ nchịkọta okpokoro Wiki ya.
Aha n'uju: Jannik Vestergaard.
Age: 28 afọ na ọnwa 3.
Ụbọchị ọmụmụ: Daybọchị 3 nke Ọgọstụ 1992.
Ebe amụrụ onye: Obodo Hvidovre na Denmark.
Ndị nne na nna: Wiebke (mama) na John (nna).
Ụmụnne: Anna na Marie.
Nwunye: Pernille Vennike.
Children: Nwa nwoke dika nke November 2020.
Ihe omume: Egwuregwu America, ezumike, ikiri ihe nkiri na isoro ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
ụgwọ: £ 3,120,000.
Ezigbo Net: 15.8 Nde Euro (2020 stats)
Heigh na ụkwụ: 6 ụkwụ, iri na otu.
Elu na mita: 1.99 m.